समाचार - के मास्कहरूले उनीहरूलाई लगाएको मान्छे वा वरपरका मानिसहरूलाई सुरक्षा दिन्छ?
के मास्कहरूले उनीहरूलाई लगाएको मान्छे वा वरपरका मानिसहरूलाई सुरक्षा दिन्छ?
"मलाई लाग्छ कि त्यहाँ पर्याप्त प्रमाण छ कि सबै भन्दा राम्रो फाइदा भनेको COVID-१ people भएका व्यक्तिहरूको लागि अरूलाई COVID-१ giving दिनेबाट जोगाउन हो, तर तपाईं अझै मास्क लगाउनुबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं डान गर्नुहुन्न भने '। टीको COVID-19 छ, "चिन-ह Hong्गले भने।
मास्कहरू "स्रोत नियन्त्रण" को रूपमा अझ प्रभावकारी हुन सक्दछ किनकि त्यसले ठूला निकासका थोपाहरूलाई सानो थोपामा वाष्पीकरण हुनबाट रोक्न सक्छ जुन टाढा यात्रा गर्न सक्दछ।
याद राख्नुपर्ने अर्को कुरा, रदरफोर्डले उल्लेख गरे, त्यो हो कि तपाईं अझै पनि आफ्नो आँखामा झिल्ली मार्फत भाइरसलाई पक्रन सक्नुहुन्छ, जोखिम जुन मास्किंगले हटाउँदैन।
के मास्कको प्रकारले फरक पार्छ?
अध्ययनले विभिन्न मास्क सामग्रीहरू तुलना गरेको छ, तर सामान्य जनताका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विचार सान्त्वना हुन सक्छ। चिन-ह Hong्गले भने, तपाईले आराम र नियमित रूपमा लगाउन सक्नुहुने उत्तम मास्क एउटा हो। N95 श्वासप्रश्वासकहरू इंटुब्युसन जस्ता चिकित्सा अवस्थामा मात्र आवश्यक छन्। सर्जिकल मास्कहरू सामान्यतया कपडाको मास्क भन्दा बढी सुरक्षित हुन्छन्, र केही व्यक्तिहरू उनीहरूलाइ हल्का र लगाउन सहज हुन्छन्।
मुख्य कुरा के हो भने कुनै पनि मास्क जसले नाक र मुख ढाक्छ भने फाइदा हुन्छ।
"अवधारणा पूर्ण रोकथामको सट्टा जोखिम न्यूनीकरण हो," चिन-ह Hong्गले भने। “यदि तपाईंले मास्क १०० प्रतिशत प्रभावकारी छैन भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईंले हात उठाउनुहुन्न। त्यो मूर्ख छ। कसैले कोलेस्ट्रोल औषधि लिइरहेको छैन किनकी उनीहरूले १०० प्रतिशत हार्ट अटैकलाई रोक्न खोजेका छन्, तर तपाईले आफ्नो जोखिमलाई घटाउँदै हुनुहुन्छ। "
यद्यपि रदरफोर्ड र चिन-ह both दुबैले एन 95 mas मास्कलाई भल्भका साथ सावधानी अपनाए (सामान्यतया धुलोको इनहेलेसन रोक्न निर्माणमा प्रयोग गरिएको थियो) किनभने उनीहरूले तपाईंको वरिपरिको सुरक्षा गर्दैनन्। यी एक तर्फी भल्भहरू बन्द हुन्छ जब पहिरनेले सास फेर्छ, तर खुला हुन्छ जब लगाउनेले बाहिर सास फेर्छ, यसले अप्रकाशित हावा र थोप्लाहरू उम्कन दिन्छ। चिन-ह Hong्गले भने कि जो कोहीले भल्भ्ड मास्क लगाएका छन् तिनीहरूले यसमा सर्जिकल वा कपडाको मास्क लगाउनु पर्छ। "वैकल्पिक रूपमा, एक गैर-भल्भो मुखौटा लगाउनुहोस्," उनले भने।
सान फ्रान्सिस्कोले निर्दिष्ट गर्‍यो कि भल्भसहितको मास्कहरूले शहरको अनुहार ढाक्नको आदेशलाई पालना गर्दैन।
तातो उत्पादनहरू - साइटम्याप - एएमपी मोबाइल3तह Fda संग डिस्पोजेबल मास्क, 3ply सर्जिकल फेस मास्क, स्तर Sur सर्जिकल मास्क, Ffp3 अनुहार मास्क, P प्लाई गैर बुनेको फेस मास्क, 3ply डिस्पोजेबल फेस मास्क,